एक टुर गाइडको प्रेमकथा ‘जाऊ भनेपछि मैले पनि नाइँ भन्न सकिनँ…. त्यसपछि’ | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
एक टुर गाइडको प्रेमकथा ‘जाऊ भनेपछि मैले पनि नाइँ भन्न सकिनँ…. त्यसपछि’
म पाहाडको छोरो । पहाडमा जन्मी हुर्केको । मेरो सालनाल पहाडमै गाडिएको हो । म खेली हुर्की बढेको पहाडमै । पहाडसँग म परिचित र मसँग पहाड परिचित । कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्थ्यो बर्खाको भेलमा बगेको पहिरो म देखेपछि चुपचापले बस्छ । मेरा बाबुआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैथोक पहाड हुन् । पहाड देउता मेरा लागि । भुमे, सिमे पुज्नुहुन्थो आमाले अनि पहाडलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले आमाबाट सिकेको थिएँ । मेरो घरभन्दा अलि पर ठूलो महादेव डाँडा थियो । त्यहाँँ वर्षको दुईचोटि पञ्चवली पूजा लाग्थ्यो । म बिहान ब्युझेदेखि ननिदाएसम्म पहाडसँगै खेल्ने बोल्ने चल्ने दगुर्ने गर्थें ।
एक दिन एकाएक पहाडबाट पढ्न भनेर मेरा बाबुले मलाई सहर ल्याउनुभो । पहाडबाट छुट्टिएर आए । सहरमा पहाड छैन । सहरमा पहाडको स्नेह र जुनेली रात पनि छैन । सहरमा पहाडको शीतलता र शान्ति छैन । सहरमा छिमेकीको माया र न्यानोपन छैन । सहरमा कसैसँग अपनत्व छैन । सहर एक्लो छ । सहर दुःखी छ । सहरमा म एक्लो । पहाडमा पहाड एक्लो । हामी दुई कहिलेकाहीँ बिहानको उज्यालोमा परैबाट वार्ता गथ्र्यौं । हुस्सु फाटेपछि शिवपुरी हेरेर म बेस्सरी रुन्थँे ।
ठमेलको उकालोमा मेरो कोठा । हरि साहुको घरमा थुप्रै परेवा पालेका थिए । पहाड छोडेर आएपछि हरि साहुको छतमा भएका परेवाको हुलसँग मेरो मन रमाउन थाल्यो । गाउँबाट एक महिनालाई भनेर बोकेर ल्याएको चामल पन्ध्र दिनमै स्वाहा । शान्ति विद्यागृह लैनचौरमा ९ कक्षामा अध्ययन गर्थें ।
हरि साहुको घरमा एकजना ट्राभलएजेन्सी चलाएर बसेका दाइ थिए, कृष्ण लामिछाने । फुर्सद मिलेको समयमा म ठमेल चाहार्थें । त्यहाँ खुकुरी बेच्ने एकजना बिनोद दाइसँग मेरो दोस्ती थियो । तिन्ले खुकुरी बेचेर दिनकै एक दुई सय डलर कमाउँथे । मलाई भन्थे–
“ह्या तँ पनि मसँगै खुकुरी बेच्ने गर, पढ्नेहरूले पनि के लछारपाटो लाएका छन् र ? “काठमाडौँ गेस्ट हाउस अगाडि तिनी उभिएर खुकुरी बेच्थे । बाबुले स्कुलमा भर्ना गरेको ६ महिनासम्म त नबिराई स्कुल गए । तर पछि स्कुल बन्क गर्न थालेँ । हप्ताको दुई तीन दिन स्कुल बन्क गरेपछि सरहरूको गाली खान थाले । बाबुआमाको कहिले गाली नखाएको म । सरहरूको एकिहोरो गालीले आजित भए र अन्त्यमा स्कुल सधैँका लागि छोडे ।
स्कुल छोडेपछि म तिनै विनोद दाइसँग खुकुरी बेच्न थालेँ । विनोद दाइले दिनको दसवटा खुकुरी बेचिस भने तलाई पाँच सय दिन्छु भने । १५ दिनसम्म खुकुरी बेच्दा मलाई विनोद दाइले पाँच हजार दिए । म दङ्गदास हुनथाले । घरको आर्थिक अवस्था पनि बिग्रेको थियो । बाबुलाई पैसा पठाइदिए । आमा जहिले पनि पुरानो र फाटेको फरिया चोलोमा मेला पर्व गरेको देखेको थिएँ । आमालाई लुगाफाटो र भाइलाई खानेकुरा पठाइदिएँ । गाउँबाट बाबू सहर नआएको धेरै भाथ्यो । म जागिर पनि भएको भन्दिनु भनेर पैसा लुगाफाटो लिएर जाने ढुक्कुर कान्छाको छोरालाई खबर पठाएँ ।
पढ्न छोडेपछि म फुलटाइम ठमेलको गल्लीमा खुकुरी बेच्न थालेँ । खुकुरी बेच्दाबेच्दै मलाई अङ्ग्रेजी पनि अलिक बोल्न आयो । चौध पन्ध्र वर्षको खाइलाग्दो पहाडमा हुर्की बढेको लरक्क परेको लोर्के ठिटो म । अलि अलि जुँघाको रेखी बसेको । रातोपिरो अनुहार । पहाड जस्तै अटेरी ढिट र जिद्दी स्वाभावको थिएँ म ।
काठमाडौँ गेस्ट हाउस अगाडि उभिएर खुकुरी बेच्थँे । त्यही अगाडि मनास्लु ट्राभल एन्ड ट्रेक अफिस थियो । त्यहाँका प्रोपाइटर थिए पोखराका जगन्नाथ । त्यहाँ रहँदा बस्दा उहाँसँग मेरो चिनजान भएको थियो । उमेरले मभन्दा उनी दाइ थिए । खुकुरी बेच्दाबेच्दा वरिपरिका पसलेहरूसँग म परिचित भएको थिए । जगन्नाथ दाइले कहिलेकाहीँ बोलाएर कफी पिलाउँथे । पहिलो चोटि कफीको स्वाद चखाउने मलाई जगन्नाथ दाइ नै थिए । जगन्नाथ दाइको पसल कौल अगाडि जितेन्द्रजीले खैरेलाई तन्ना बेच्थे । उनले तन्ना बेचेर घडेरी जोडिसकेका थिए । उनी पनि स्कुल बन्क गर्दा रहेछन् । मसँग राम्रै चिनजान भयो ।
असोजको महिना थियो । ठमेल कुइरेले खचाखच भरिन थालिसकेको थियो । आठ दसजना कुइरे कुइरिनीलाइ अघिपछि लगाएर ब्रोकन अङ्ग्रेजी बोल्दै हिँड्ने केही टुर गाइडलाई चिनेको थिएँ । तिन्ले मस्त पैसा कमाउँछन भनेर मलाई तिनै तन्ना बेच्ने जितेन्द्र दाइले भनेका थिए । अलिक अङ्ग्रेजी बोल्न जानेपछि मलाई पनि ती खैरेखैरिनीको टुरिस्ट गाइड भएर यिनलाई घुमाउन मन लागेको थियो । एक दिन त कसो मनको धोको पूरा नहोला भनेर सोची बस्थँे ।
टुरिस्ट गाइड बन्न त नेपाल पर्यटन बोर्डले लिने जाँचमा सामेल भएर पास गरेपछि मात्रै टुरिस्ट गाइडको प्रमाण दिनेरहेछ । आफू त ९ कक्षा पनि पास नगरेको परे । त्यो सपना मैले त्यागिदिएँ । एक दिन मनास्लुका जगन्नाथ दाइले– “मनु भाइ तपाईं दसैँ अगाडि अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने दुइटी अमेरिकन केटीहरूको भरिया भएर जानुहुन्छ ?”भनेर सोध्नुभयो । उहाँले फेरि दोर्याउनु भयो– “अमेरिकन ती केटीहरूले तपाईंको खुकुरी किनेका रहेछन्, मन पर्यो रे मिल्छ भने त्यो केटालाई भरिया बनाएर पठाइदेउन भनेका छन्, ल भन के गर्छौ त ?”
दाइको कुरा सुनेर म छक्क परँे । अलमल परेँ । खोइ कस्तो कस्तो पो अनुभूति भयो मलाई । गाइड बन्ने धोको तर भरियाको पो अफर आउँछ । ती केटीहरूलाई खुकुरी बेचेको याद आयो । खुकुरी बेच्दा धेरै बार्गेनिङ गर्नुपरेको थिएन । खुरुखुरु पैसा तिरे, तर खुकुरी कहाँ बनेको भनेर सोधपुछ चँै गरे । मैले भोजपुरमा भन्दिएको थिएँ । दुइचोटि फर्की फर्की आएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस संक्रमणबाट विश्वभरि मृत्यु १ लाख १९ हजार, अमेरिकामा मृतकको संख्या २३ हजार ६ सय ४०
“विल यु बी हेयर टिल दी इभिनिङ ?”भनेर सोधेका थिए ।
मैले बडो फुर्तिलो भएर “एस एस”भन्देको थिए । दुई गोरीहरूले खुब हेरेका थिए । अहिले आएर पो थाहा भयो ।
सात दिनको टुर थियो । टुर गाइड नलिईकन जानि रे । जगन्नाथ दाइले भने– “भाइ तिमीलाई ती केटीहरूले जसरी नि मिलाइदेऊ भनेका छन् । राम्रै पैसा दिन्छु जाऊ” ।
तिनीहरूले तिमीलाई मन पराएका छन्, टिप्स पनि राम्रै दिन्छौँ भनेका छन् । जाऊ भनेपछि मैले पनि नाइँ भन्न सकिनँ । सत्ताइस अठ्ठाईस वर्षका जवानीले धपक्कै बलेका दुई गोरीहरूबीच बसँे म । ठमेल गणेशमान चोकबाट बा.अ.च. ११३३ नम्बरको टुरिस्ट बस पोखरातिर हुइँकियो । बाबुले सहर ल्याएर छोडेको ठीक ९ महिनापछि मैले बल्ल पहाड देख्न पाउने भएँ । पहाडको सुगन्ध र खुला आकाशको मजा लिन पाइने भइयो । यही कुरा मनमा सञ्चित थियो मेरो ।
“डिएर मनु ! डोन्ट फिल यु आर आवर पोर्टर”सोनियाले भनी ।
“यस मनु, यु आर आवर बेस्ट गाइड, बेस्ट फ्रेन्ड”लिलीले बोली ।
“यु आर सो इनोसेन्ट ।”
“यु नो नोथिङ बट यु आर ह्यन्डसम बोइ ।”
“होप यु विल गाइड अस प्रफेक्टली ।”
दुइटी लगातार बोलेपछि मैले पनि केहित बोल्नुपर्छ भन्ने सोचेँ ।
“इटिज माइ फ्रस्ट भिजिट टु पोखरा एन्ड अन्नपूर्ण बेसक्याम्प बट नो वरिज आई क्यान डु ।”
“वाउ डिएर मनु ! एस यु क्यान डु ।”
पहिलो चोटि केटीहरूको बीचमा बसेर गफिँदै बसको यात्रा गर्दै थिएँ । कतिको जवाफ मैले फर्काएँ । कति त तिनले मेरो आँखामा हेरेर बुझे । जे बोले पनि उनीहरूले मेरो वाक्य सहजै बुझिहाल्थे । मन आत्तिएको पनि छ । आधा खुशी आधा छट्पटी अलिकति सङ्कोच अलिक बदमासी मन लिएर थानकोट काटियो । बस सिङ्गो रिजर्भ थियो । बस चालक र खलाँसी अगाडि बसेका थिए । उसो त चालकलाई पनि अलि अलि अङ्ग्रेजी आँउदोरहेछ ।
गजुरी पुगेपछि चालकले रेस्ट गरौँ भन्यो । घाम अस्ताउनुभन्दा अगाडिको पहाडी दृश्यले मलाई कस्तो रोमाञ्चक अनुभूति गराएको थियो । लिली र सोनिया क्यामरा झिकेर फोटो लिन थाले । तिनले पहाडको भन्दा पनी मेरो फोटो बढी खिचे ।
चालक दाइ आएर मेरा कान फुके– “मनु भाइ यिनीहरूलाई यहाँ केही सामान किनाउन लगाउनुस न तपाईं हामीलाई कमिसन आउँछ ।”
पहिलो चोटि थाहा पाएँ, सँगै गएका टुरिस्टले केही सामान किने भने गाइडलाई कमिसन आउँछ भनेर । मैले केही पनि किनाइन । यस्तो गर्नु गराउनु वाहियात लाग्यो ।
“डिएर मनु लेट्स ह्याभ समथिङ ओके ?”
लिली अलिक भोकाएकी देखिन्थी । हामी रेस्टुरेन्टमा खान गयौँ । मलाई वाइवाइ चाउचाउ मनपथ्र्यो, सबैलाई त्यही मगाएँ । सोनियाले तीन बोतल बियर मगाई । साहुजीले फटाफट बिएर खोल्यो । सोनिया लिली र म भित्री रुममा बसेका थियाँै । विदेशी भनेसी अलिकति राम्रो सम्मान गर्दारेछन् । चालकहरू बाहिर थिए ।
अहिलेसम्म मैले बियर पिएको थिइन । सङ्कोच लाग्यो ।
“आइ एम बिलोङ्स टु हाइएर कास्ट नो बियर प्लिज ।’
मेरो कुरा सुनेर लिली खित्का छोडेर हाँसी । सोनिया अचम्मित भइरहेकी थिई । यस्तो लाग्यो कि बियर नपिउने मान्छे उनीहरूले पहिलोपटक देखिरहेका थिए ।
“मिस्टर मनु थापा बियर इज लाइक वाटर टेक इट आज मच आज यु क्यान नो प्रोब्लम ।”
गणेशमान चोकमा बस छुट्नु अगाडि जगन्नाथ दाइले भनेको कुरा सम्झिएँ– “मनु बाबू तिमी भरिया होइन टुरिस्ट गाइड भएर जाँदैछौ, कुनै पनि कुराको सङ्कोच नमान्नु । यिनीहरूको मज्जाले सेवा गर्नु केही परे म जिम्मेवार छु । अतिथि देवो भवः ।”
बोतलबाट बिएर गिलासमा खन्याइदिई लिलीले ।
म अझै दोधारमा थिएँ । वास्तवमा मैले पो सेवा गर्नुपर्ने थियो तर ती दुईले पो मेरो सेवा गर्न थाले । पानी जस्तै त हो नि भनेसी मैले पनि पिएँ मज्जाले । भोक लाग्याथ्यो, बिएर र चाउचाउ खाइयो । कस्तो रमाइलो लाग्यो । उनीहरूले पनि मज्जाले पिए । हामी तीनै जनाले मस्त रमाइलो गर्यौं ।
मेरो कपाल अलि घुमुर्किएको थियो । मेरो मतलव अलि कर्ली कर्ली परेको । लिलीले मेरो कर्ली परेको कपाल सुमसुम्याइरही । हामी गाडीमा चढ्यौ । चालक दल अघि बसे । सोनियाभन्दा लिली अलिक चञ्चले थिई । हिस्सी परेकी थिई । उसले हास्दा गालामा खाल्डा पथ्र्यो । बैंसले मदमस्त थिए दुवै । पूर्णिामाको अघिल्लो दिनको जुनेली आकाश जस्तो पूरै मातले मात्तिएका ।
मैले कहिले पिएको थिइन । पिउँदा अर्कै मजा हुदोरहेछ । मनको सङ्कोच बिस्तारै हराउँदै गयो । रक्सी लागेको बेलामा मान्छेले किन अङ्ग्रेजी बोल्छ भनेको थाहा भो आज ।
असोज महिना यस्तै रमाइलो । दसैँ नजिक थियो । झ्यालबाहिर यसो हेरेँ । मुग्लिन बजार आइसकेको थियो । लिलीले रेस्ट रुम जान खोजी । ऊ अघिदेखि मसँग निकै नजिकिएर गफ गर्दै थिई । एक होटेलको बाथरुम लिएर गएँ लिलीलाई ।
बाटो क्रस गर्यौं । लिलीले मेरो हात समाइ र भनी– “डिएर मनु यु आर रियल्ली काइन्ड हार्टेट म्यान आई लाइक यु ।”
मैले केही बोलिनँ । गाडी बाटोमै थियो । रात छिप्पिँदै गयो । त्रिशूली नदीलाइ छोडेर अब हामी आबु खैरिनी हुँदै अगाडि हिँड्यौ । टुरिस्ट गाडी लक्जरिएस थियो । लिली मेरो काँधमा भुसुक्कै निदाई । सोनिया मेरो काँधमा निदाएकी लिलीलाई देखेर जेलियस भएको जस्तो लाग्यो । तर मैले उस्लाई हटाउन सकिनँ । लिली निदाइ । बाटो सुनसान थियो । सोनियाले मलाई हेरेर लामो श्वास फेरि अनि एक्कासि एउटा प्रश्न गरी–
“मनु आर यु भर्जिन गाई ?”
“ह्वाट यु मिन सोनिया ?”मैले बुझिन के भनेकी हो सोनियाले ।
“आइ मिन डिड यु हाभ सेक्स बिफोर ?”
“ओ यु मिन ड्याट ? नेभर एभर ।”
केटीको मुखबाट पहिलो चोटि यस्तो खालको प्रश्नले मभित्रको मनु अचम्मित भयो ।
यो पनि पढ्नुहोस विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले विहीबार सम्पादकहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै
“यी कुइरिनीहरूलाई यति बोल्नु भनेको चिया पिए जस्तै हो मनु भाइ ।” चालक धेरै अनुभवी रेछन् । उनी हरेक हप्ता पोखरा आउदारेछन् ।
“डोन्ट बी सिरियस मनु टेक इट इजी एन्ड इन्ज्योइ विथ अस ओके ?”
लिली ब्युँझिई । हामी पोखरा पुग्यौँ । रातको करिब दस बजेको थियो । बुकिङ गरेको होटेलमा पार्टी चलिरहेको रहेछ । रुममा गयौँ । उनीहरू नुहाउन गए । म एक्लो सोफामा बसेर खोइ के–के सोच्न थालेँ । डबल ब्ल्याक ह्विस्की र तीन सफा गिलासले स्वागत गरिरहेको थियो । अघि बियर पिएको नसा उत्रिसकेको थियो । लिली नुहाएर मुस्कुराउँदै बाथरुमबाट निस्किी ।
“हे मनु आर यु लुकिङ सो सिरियस म्यान प्लिज ।”
“नो नो आई एम ओके लिली ।”
जगन्नाथ दाइले यिनलाई जसरी पनि सेवा पुर्याउनु भन्नुभाको कुरा सम्झिएँ । लिलीले फ्रेस रुमाल मेरो काँधमा राखिदिई र भनी– “मनु गो फर बिथ, इफ यु निड एनि हेल्प प्लिज कल मी ।”
नुहाउन गएँ । सोनिया पनि नुहाएर निस्की । दुईवटा बाथरुम थियो । ठूलो कोठामै दुई बेड थिए । हतारले नुहाएँ ।
नुहाएर निस्किँदा ह्विस्की गिलासमा थियो । लिली र सोनिया पिउँदै थिएँ । चालक दललाई अलि सस्तो होटेल बुक गरिदिएको रहेछ । थकाइ लागेको थियोे । खाना रुममै ल्यायो वेटरले । हामी तिनैजना नसामा झ्याप थियौँ । एकले अर्काको जुठो पनि खायाँै । तर निकै रमाइलो महसुस हुँदै गयो रात । उनीहरू दुवै गीत गाउँदै नाच्न थाले । म पनि के कम थिए र कम्मर हल्लाउन थाले ।
मैले तिन्को सेवा होइन तिनले चाहिँ मेरो सेवा गर्न थाले । यस्तो लाग्न थाल्यो कि यिनीहरूसँग मेरो वर्षौंदेखिको चिनारी थियो । उनीहरू एक बेडमा सुतँे । म अर्को बेडमा कतिबेला निदाए थाहै भएन । एकैपटक खुला झ्यालको फक्लेटाबाट छिरेको बिहानी किरणले गालामा म्वाई खाँदा पो झल्यास ब्युझिएँ । गालामा तातो आयो । किन गालामा तातो आयो भनेर छामेको सूर्य पो छ त नजिक ।
‘डिएर मनु गुड मर्निङ’ भन्दै लिलीले तातो चिया हातमा थमाइदिई । उनीहरू फ्रेस भइसकेका रहेछन् । चिया पिएपछि लिलीले ब्रस तुथपेस्ट र फ्रेस तौलिया हातमा थमाइदिई र भनी– “मनु प्लिज टेक सावर विथ हट वाटर ।” तर मलाई तातो पानी निकाल्नै आएन । लिलीले ढोका ढक ढक गरी । साबुनले कपाल भिजाइसकेको थिएँ । तर धन्न हाफ पाइन्टमै थिए । चुकुल खोलिदिएँ । लिलीले तातो पानी निकाली दिई । कताबाट झुक्किएर लिलीको जिउमा अलिकति साबुन त लागि गो । ऊ हाँस्दै डोन्ट लक योर डोर भन्दै निस्की ।
पोखरा, हेम्जा, फेदीखोला, पोखरीटोल, कुलडाँडा, अस्ट्रेलियन क्याम्प, नर्थफेस सबै घुमेर हामी अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा रमाउन थाल्यौँ । सेतो हिमालय पर्वतले मुसुक्क हासिरहेको जस्तो भान हुन्थ्यो । म पहाडको थिएँ । मलाई देखेर पहाडी हावा पनि चञ्चलिन थाले । लिली म र सोनिया यति नजिक भयौँ कि फूल र हावा जतिकै नजिक । मैले जिन्दगीमा पहिलो चोटि प्रकृतिसँग प्रेम मिलेको देखे । हिमाल देखेपछि लिली र सोनिया त पागल नै हुँदारहेछन् । एउटा हिमाली रुख युरिकेरियाको फेदमा थियौँ लिली, म र सोनिया । हावाको झोक्काले फुरफुर पारिरहेको मेरो कर्ली कपालमा लिलीले छोई । गालामा छोई । चिसोले गाला रातो भाको थियो । लिली बेजोडले कराइ– “डियर मनु, वी लभ यु सो मच” आवाज पारिसम्म पुगेर प्रतिध्वनित हुँदै हामीतिरै फर्केर आयो । सोनियाले मलाई न्यानो नर्थफेसको जाकेट लगाइदिई । लिलीले मेरो निदारमा म्वाई खाई । प्रकृतिले हामी तिनैलाई मदहोस बनायो । सत्र वर्षको गाउँले केटो म पहिलो चोटि प्रेमको अनुभूति गरेँ मैले । लिली र सोनियासँग । निधारमा म्वाई खाएपछि लिलीले भनी–
“मनु लभ इज नट फर लस्ट, लभ इज नट फर फन, लभ इज नट फर सेक्स, लभ इज नट फर इज्याकुलेसन, इट इज फर टुगेदरनेस एन्ड वे अफ हाभिङ गड” खोइ कति बुझेँ मैले लिलीको प्रेमको परिभाषा ।
पढ्न बीचैमा छोडेर यो काममा लागेको भनेपछि लिलीले दुःख फिल गरी । यता काठमाडौँ आएपछि लिली आफै मेरो स्कुल गई । मेरा सरहरूलाइ भेटी र मेरो एक वर्षको फी तिरिदिई ।
त्यो दिनदेखि मैले मिहिनेतले पढ्न थाले । आज मेरो ठमेलमा क्युरियो पसल छ । मलाई प्रेम, सेवा, आनन्द, सम्मान र आतिथ्यता सिकाउने मेरी गुरुआमा लिली नै हो ।
हाम्रो भेट नभएको धेरै वर्ष भएको थियो । एक दिन मेरो पसलमा अमेरिकाबाट फोन आयो–
“हेलो इज दिस मनु ?”
“एस दिस इज मनु स्पिकिङ ।”
“ओ दिस इज स्मिथ । सन अफ लिली ।”
“प्लिज टु मिट यु स्मिथ ।”
“सी इज नो मोर इन दिस वल्र्ड, आई विल कम टु भिजिट नेपाल सुन ।”
“ओ सो सरी एबाउट लिली । प्लिज मिट मी ह्वेन यु कम ।”
फोन राखेपछि बेस्सरी रोएँ । दस वर्ष अगाडि एयर्पोटबाट छुट्टिएर जाँदा लिलीले मलाई एउटा खाम दिएकी थिई । त्यो खाम मैले अहिलेसम्म खोलेको थिइनँ । लिलीको मृत्युको खबरले मलाई साहै्र पोल्यो । के रछ त्यो खाम खोलेर हेरेँ ।
खाममा लिलीले मेरो स्कुलको हेडसरलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्र थियो ।
“डिएर हेड सर ! मनु इज भेरी जेन्टल बोई । प्लिज टेक किएर हिम एन्ड हि विल नेभर बन्क हिज क्लास फ्रम नाउ अन ।”
पत्रभरी आँसु झर्यो र छोप्यो मेरो आसुले, लिलीले लेखेका प्रेमका अक्षरहरूलाई ।
यो पनि पढ्नुहोस लुटेर खानेकाे एकाएक पद खोसिएपछि गुठीका सदस्यहरूमा रुवाबासी
२२,पुष.२०७४,शनिबार १८:०० मा प्रकाशित
← स्कुले माया–पिरती ‘हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भए जस्तै….
कथा: साधु र बालक ‘साधुले उसलाई सुम्सुमाउँछन्…….’ →